Ku darso bogaggaaga ugu gaabis ah adigoo isticmaalaya Prefetching | BehMaster
Bogga ugu weyn/web Design/Ku darso bogaggaaga ugu gaabis ah adigoo isticmaalaya Prefetching
Ku darso bogaggaaga ugu gaabis ah adigoo isticmaalaya Prefetching
Hagaajinta xawaaraha goobtaada ecommerce waa inay ahaato mudnaanta 2020. Iyadoo kor u qaadida waxqabadka ay noqon karto waqti-qaadasho iyo qaali, waxaa jira hagaajin degdeg ah oo sameeya farqi weyn.
Xawaaraha boggu waa muhiim, gaar ahaan maadaama kooxda Google Chrome ay qorshaynayso inay ceebayso goobaha rarista qunyar socodka ah sanadkan sida lagu sharaxay Noofambar 2019 ee Chromium Blog.
Mustaqbalka, Chrome waxa laga yaabaa inuu aqoonsado goobaha sida caadiga ah u rarta si degdeg ah ama u gaabiya isticmaalayaasha leh calaamado cad. Tani waxay qaadan kartaa dhowr nooc waxaanan qorsheyneynaa inaan tijaabino xulashooyin kala duwan, si loo go'aamiyo midka siiya qiimaha ugu badan ee isticmaalayaashayada.
Bading waxaa loogu talagalay in lagu garto marka goobaha la qoray si ka dhigaysa inay si guud u gaabiyaan, iyadoo la eegayo daahitaanka culayska taariikhiga ah. Intaa waxaa dheer, waxaa laga yaabaa inaan tan balaadhino si aan ugu darno aqoonsiga marka boggu ay u badan tahay inuu u gaabinayo isticmaalaha iyadoo lagu salaynayo qalabkooda iyo xaaladaha shabakada.
Google waxa ay sheegtay in ay aqoonsan doonto goobaha rarista qunyar socodka ah. Xigasho: Chromium Blog.
Maqaaladii hore, waxaan ka hadlay fikradaha lagu hagaajinayo waxqabadka, sida HTML caching iyo go'doominta agabka rarista qunyar socodka ah. Maqaalkan, waxaan ku sharixi doonaa sida loo go'aamiyo boggaga ugu gaabis ah oo loo isticmaalo hagaajin fudud si loo dedejiyo.
Falanqaynta Google waxay ka warbixisaa boggaga ugu gaabiya goobta iyo sida isticmaalayaashu u helaan. Waxaan ku amri karnaa daalacashada shabakada inay "horey u soo bandhigaan" boggaga noocaas ah si marka isticmaalayaashu ay gujiyaan, ay si degdeg ah u soo baxaan.
Waa kan habka
Bogag gaabis ah
Falanqeynta Google, tag Habdhaqanka> Xawaaraha goobta> Wakhtiyada bogga. Dooro xogta (grid) aragtida oo u kala saar tiirarka "Avg. Waqtiga la soo dejiyo bogga."
Si aad u aragto boggaga si qunyar u soo shubaya gudaha Google Analytics, gal Habdhaqanka> Xawaaraha goobta> Wakhtiyada bogga. Riix image si aad u ballaadhiso.
Tani waxay tusi doontaa boggaga ugu gaabiya marka hore. Tiirka u dambeeya, "Qiimaha Bogga," wuxuu caadi ka dhigaa dakhliga loo nisbeeyo bog kasta iyadoo loo maleynayo in la xoojiyey e-ganacsiga la kartiyeeyay. Waa halbeeg wanaagsan ganacsatada inay mudnaanta siiyaan boggaga ay diiradda saaraan.
Marka xigta, waxaan u baahanahay inaan ogaano jidka gudaha ee u horseedaya booqdayaasha bogagga ugu gaabis ah. Waxaan u abuuri doonaa warbixin gaar ah tan. Laakiin, marka hore, aynu dhawrno waddooyinka isticmaalaha caadiga ah ee Dhaqanka> Socodka Dhaqanka.
Halkan waxaan ku arki karnaa waddooyinka ugu caansan ee booqdayaasha. (Warbixintu waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad fahamto boggaga soo saara booqdeyaasha ugu weyn.)
Tag Dhaqanka> Socodka Dhaqanka si aad u aragto waddooyinka isticmaalaha caadiga ah. Riix image si aad u ballaadhiso.
Si aad u abuurto warbixinta gaarka ah, tag Habaynta> Warbixinada Gaarka ah> Warbixin Gaar ah oo Cusub. Magacaabida warbixinta - Waxaan isticmaalay "Wadooyinka Bogagga Gaabis ah" ee shaashadda hoose - oo dooro sida cabbirrada "Dariiqa Boggii hore," "Bogga," iyo "Bogga Bixinta." Metrics, dooro "Qiimaha bogga" iyo "Avg. Waqtiga la soo dejiyo bogga."
Ku samee warbixinta gaarka ah at Habaynta> Warbixinada Gaarka ah> Warbixin Gaar ah oo Cusub. Guji sawirka si aad u weynayso
Waxaan helnaa warbixin la mid ah tan sare (at Dabeecada> Xawaaraha goobta>Wakhtiyada bogga), laakiin kan waxaa ku jira boggii hore ee kulanka isticmaalaha caadiga ah.
Warbixinta gaarka ah ee Google Analytics waxaa ku jira boggii hore ee fadhiga isticmaalaha caadiga ah. Riix image si aad u ballaadhiso.
Tallaabada xigta waa in la dabaqo fikradda xooggan: tilmaanta biraawsarkaaga.
Tilmaamaha Baraha Shabkada
"Tibaaxo" waa tilmaamo ku socda daalacashada shabakada si ay u rartaan ilaha bogga iyo isku xirka wakhti ka hor. Nidaamku wuxuu si weyn u wanaajiyaa xawaaraha bogga. browser kastaa ma taageero tilmaam kasta. Seddex ka mid ah kuwa ugu caansan waa "horey u shubista," "prefetching," iyo "prerendering."
Horay u soo dejinta u baahan kood ku jira HEAD dukumeenti HTML ah, sida:
Tilmaanta soo-dejinta hore waa dardaaran ku qasbaysa browserka inuu soo dejiyo kheyr ka hor inta uusan ka helin dukumeentiga. Tusaalaha wanaagsani waa far ku jira galalka CSS ee qarsoon. Halkii laga lahaa browserku soo dejin lahaa oo ka baaraandegi lahaa faylalka CSS ka dibna xarfaha, dardaaranka horudhaca ah wuxuu soo dejinayaa farta xagga dambe, taasoo ka dhigaysa mid la heli karo marka loo baahdo.
Si aad u hesho wax badan oo ku saabsan soo-dejinta iyo daalacashada taageerta, eeg boostada CanIUse.com.
Hordhac wuxuu u baahan yahay kood ku jira HEAD dukumeenti HTML, sida tan:
Tilmaantan waxa ay awood u siinaysaa biraawsarkaaga in uu keeno agab laga yaabo in loo baahdo marka isticmaaluhu uu qaado talaabada xigta. browser-ku waxa uu samayn doonaa oo kaliya ka dib marka uu sameeyo bogga hadda jira waase haddii uu jiro xaddi ku filan.
Waxaan ku balaadhin doonaa hordhaca qoraalkan si aan u dedejiyo boggaga gaabiya.
Baro wax badan oo ku saabsan prefetching-ka iyo browser-yada taageera halkan.
Hordhac waxa ay ahaan jirtay dardaaran awood leh, laakiin hadda waa la joojiyay. Waxay ogolaatay hor-u-dhigista agabka bogga bartilmaameedka ah iyo, sidoo kale, samaynta iyaga. Waxay u baahday kood sidan oo kale ku jira HEAD dukumeenti HTML:
Baro wax badan oo ku saabsan samaynta hore iyo daalacashada weli taageera halkan.
Saadaasha Taxanaha Degdegga ah
Waxaan gacanta ku gelin karnaa tilmaam si aan u waydiisano browserka inuu horudhac u keeno boggaga soo socda ee ugu gaabis ah. Waan ognahay boggaga lagu dhejinayo xiriirkan xogta Google Analytics, ee kor lagu sharaxay.
Warbixinta muunadayda, si kastaba ha ahaatee, waxa ay cadaysay ku dhawaad ​​20,000 oo taxane suurtagal ah. Gelida tilmaamaha dhamaantood waxay qaadan doontaa waqti aad u badan!
Taa beddelkeeda waxaan ku dhisi karnaa moodal iyadoo la adeegsanayo boggii hore iyo bogga hadda ee saadaaliya bogga xiga isticmaaluhu waxay u badan tahay inuu gujiyo. Markaa waanu horudhac u samayn karnaa.
Waxaan tababari karnaa shabakad neural ah oo casri ah, sida aan ku sharaxay maqaalkeygii ugu dambeeyay. Laakiin habka ugu dhaqsiyaha badan oo ka fudud ayaa ah geedka saadaasha ee Compact, fikradda ay soo saareen saddex macalin oo cilmiga kombuyuutar ah. Laga soo bilaabo warqaddooda:
Marka la eego tiro taxane ah oo tababar ah, dhibaatada saadaalinta isku xigxiga waxay ka kooban tahay helida qaybta xigta ee taxanaha bartilmaameedka iyada oo la eegayo kaliya alaabteedii hore. Tirada codsiyada la xidhiidha dhibaatadani waa mid ballaaran. Waxaa ka mid ah codsiyada sida horudhaca bogga shabakadda, talada wax soo saarka macaamiisha, saadaasha hawada iyo saadaasha suuqa saamiyada.
Way fududahay. Geli xogta tababarka, qeex bartilmaameedka saadaalinta, oo dib u hel kulamadii ugu fiicnaa.
Tusaalaha xogta tababarka ee ka soo baxa warbixinta gaarka ah ee Google Analytics waxay u ekaan doontaa:
ha xogta = ['/bogga hore1','/current-bogga1','/xiga-slow-bogga1'], ['/bogga hore2', '/current-bogga2', '/ xiga-slow- bogga2'], ['/bogga hore3','/current-bogga3','/xiga-slow-bogga1'], ['/bogga hore-4', '/current-bogga1', '/ xiga-slow- bogga2'], ['/bogga hore2', '/current-bogga3', '/ xiga-slow-bogga3'], ['/bogga hore3', '/current-bogga2', '/ xiga-slow- bogga4'], ['/bogga hore4','/current-bogga1','/xiga-slow-bogga1'],]
Oo waa kan sida aan u tijaabin lahayn bogga bartilmaameedka:
ha la beegsado = ['/bogga hore2', '/ hadda-bogga3']];
Ugu dambayntiina, saadaalintu waxay noqonaysaa:
console.log(saadaasha) // [['/ xiga-slow-bogga3]']
Isku soo wada duuboo
Kadibna waxaan si fudud u gelinaa hal ama dhowr tilmaamood oo browser ah oo leh saadaasha.
link rel = "prefetch" href = "https://wp2wp.com/next-slow-bogga3
Boggayga tusaalaha ah ee Github wuxuu leeyahay kood taas sameeya.
Khadkani wuxuu soo dejiyaa faylka maktabadda.
Waxaan la kulmay dhibaatooyin koodka asalka ah ee kaydka, laakiin mahadsanid David Sottimano, lataliyaha suuq-geynta dhijitaalka ah, waxaan awooday inaan wax ka beddelo faylasha si aan ugu shaqeeyo hal qoraal. Waa kan feylkiisa index.js.
Waa inaan sidoo kale u mahadceliyaa Michelle Robbins, teknoolajiyada suuq-geynta iyo injineernimada, oo i baray Geedaha Saadaasha Isafgaradka ah ee webinar dhawaan.
5 WooCommerce Marketing Hacks si loo kordhiyo faa'iidooyinka 2021
2020 ayaa noqon doona sanadka si sax ah loo helo xogtayada
Ganacsiga Qoraalku Waa Ogolaanshaha Hore ee La Iibin karo
20 Madal oo lagu Iibiyo Alaabada Dijital ah
Waxa aan ka bartay Platforms Ecommerce
Hagidda ugu Fiican ee Goobaha Ecommerce
Siideynta Alaabta Ecommerce: Maarso 15, 2022
17 Qalabka bilaashka ah ee Midabka, Koodhka, SEO, UI, inbadan
15 goobood oo loogu talagalay xarfaha ganacsiga ee bilaashka ah
20 Qalabka Naqshadeynta Bilaashka ah ee 2022
Sida Nakhshad Macluumaadku u wado beddelka
13 Tusaalooyinka Xaqiiqda La Kordhiyey ee Tafaariiqlayaasha, Noocyada
Naqshadaynta Ecommerce waa mid Halis ah (laakin si qaldan loo fahmay)
20 Fonts oo Bilaash ah oo Bilaash ah oo loogu talagalay 2022
Qalabka Naqshadaynta Webka bilaashka ah ee 22 laga soo bilaabo Xilliga 2021
13 Hal-bog Mawduucyada WordPress ee Bilawga, Alaabooyinka, iyo in ka badan
11 Website oo bilaash ah oo aad ku baran karto koodka 2022
Wax-is-weydaarsiyada ku-dar-gelinta qolo saddexaad
17 Faa'iido leh UX iyo Qalabka Naqshadeynta UI
Weydii Khabiir: Waa maxay ReactJS?
20 Qalab Naqshadeynta Midabka Bilaashka ah iyo Casharrada
20 Qalab Naqshadeynta Webka Bilaashka ah laga bilaabo Xagaaga 2021
275 Moodellada Emailka ee Bilaashka ah, ee jawaabta leh
11 Madal loogu talagalay Ganacsiga aan Madaxa lahayn
Shopify wuxuu ku dhawaaqay dukaanka khadka tooska ah 2.0, ka sii badan
22 Tools Free Web Design Tools laga bilaabo Spring 2021
12 WordPress Plugins si ay u Iibiso Soo Degsashada Dijital ah
19 Madal Furan Ecommerce
Aasaasaha Ganacsiga Drupal ee Xeerka Iskaashiga, Xoriyadda Software-ka, Waxbadan
15 kanaalada YouTube ee Nakhshadeynta iyo Horumarinta
13 WordPress Plugins ee Diiwaangelinta Xubinnimada
16 Qalabka Lagu Abuuro Koorso Online ah
14 Goobaha Sawirka Sawirka, Bilaash iyo Lacag
20 Qalab Naqshad Shabakad bilaash ah laga bilaabo Jiilaalka 2021
15 Logo Sameeyayaal si fudud loo isticmaali karo
Xitaa Shirkadaha Yaryar waxay isticmaalaan AI, Barashada Mashiinnada
13 Tifaftirayaasha Fiidiyowga Bilaashka ah laga bilaabo Aasaaska ilaa kuwa Sare
9 Adeegyada Kaydinta Daruuraha ee Qarsoodiga ah
Faa'iidooyinka u doodaha tignoolajiyada ecommerce
20 Fonts oo Bilaash ah oo Bilaash ah oo loogu talagalay 2021
Qalabka Naqshadaynta Webka bilaashka ah ee 20 laga soo bilaabo Xilliga 2020
15 Casharrada Photoshop ee Sawir-qaadista Alaabta
20 Casharro bilaash ah oo lagu barto WordPress
20 Koorsooyin Bilaash ah oo lagu hormarinayo Xirfadaha Naqshadeyntaada
8 Goobo Ganacsi oo loogu talagalay Mawduucyada, Template, Plugins
JAMstack sax ma u tahay Ganacsigaaga Ecommerce?
21 Qalab Naqshadeynta Webka Bilaashka ah laga bilaabo Xagaaga 2020
13 Logo Gallery ee Waxyiga
'Codsiga Lacag Bixinta API' si loo Joojiyo Isbaarooyinka Ecommerce, Hagaajinta Amniga
13 Xirmooyinka Wargeysyada Robust ee WordPress